Kubvunza Services - Shang Hai Tongke Kuyerera Technology Co, Ltd.
TKFLO kubvunza kwekubudirira kwako
TKFLO iripo kurayira vatengi vayo pamibvunzo yese ine chekuita nemapombi, mavhavha uye sevhisi. Kubva pane zano rekusarudza chaicho chigadzirwa kune zvaunoda kune akasiyana pombi uye vharuvhu sarudza.
Tiripo nekuda kwako - kwete chete kana zvasvika pakusarudza chigadzirwa chitsva, asiwo mukati mehupenyu hwese hwepombi dzako nemaitiro. o anopa zvikamu zvekuchengetedza, kuraira pamusoro pekugadzirisa kana kugadzirisa, uye Simba rekuchengetedza gadziriso yeprojekti.
TKFLO's technical consultancy sevhisi inopa mhinduro dzega dzega kuona kushanda kwakanyanya kwepombi, mavhavha uye zvimwe zvinotenderera michina. Paunenge uchidaro, TKFLO inogara ichitarisa sisitimu yacho seyakazara. Idzi nhatu huru dzinovavarira: kugadzirisa uye / kana kukwidziridza masisitimu zvinoenderana nekuchinja kwemamiriro, kuwana simba rekuchengetedza uye kuwedzera hupenyu hwebasa hwekutenderera michina yezvose zvinogadzira.
Tichifunga nezvehurongwa hwakazara, mainjiniya eTKFLO anogara achiedza kutsvaga mhinduro yakanyanya. Kubva pakugadziridza kusvika pakushandisa zvinhu zvakagadziridzwa, kudzoreredza masisitimu anomhanyisa kana kutsiva muchina, tinoshanda pamwe chete nemutengi kugadzira mhinduro dzemumwe nemumwe. Ivo vanoona yakanyanya kunaka nzira yekugadzirisa masisitimu kune anochinja mamiriro, angave ari munzvimbo yehunyanzvi kana shanduko mumutemo.
Technical consultancy: vimba nechiitiko uye kuziva-sei
TKFLO's technical consultancy sevhisi yepombi uye zvimwe zvigadzirwa zvinotenderera zvine zvibodzwa zvitatu:
A. Kugadziridza sisitimu
B. Kuchengetedza magetsi
C. Hupenyu hwakareba hwehupenyu hwemidziyo inotenderera yechero ipi inogadzirwa
1. Kuti uve nechokwadi chekushomeka kwevatengi, nyanzvi dzebasa reTKFLO dzinotora ruzivo rwevose madhipatimendi ehunyanzvi eTKFLO, kubva kuinjiniya kusvika kuGadzira.
2. Kugadziriswa kwekumhanyisa kuti uwane yakakwana pombi yekudzora kune akasiyana system zvinodiwa
3. Nadzurudzo yeiyo hydraulic system, semuenzaniso, nekukonzeresa matsva mafekitori nemadhizisi
4. Kushandiswa kwezvinhu zvakagadzirwa zvakanyanya kudzora kupfeka
5. Kukodzera kwetembiricha uye vibration sensors yekutarisa mashandiro uye mamiriro - pachikumbiro, data inogona zvakare kuendeswa kure
6. Kushandiswa kwe-up-to-date mabheyari tekinoroji (chigadzirwa-chakazorwa) kwehupenyu hwakareba hwebasa
7. Mapfekero ekuvandudza kugona
8. Bhenefiti yehunyanzvi hwekurapa pamapombi uye zvimwe zvinotenderera michina
9. Kuchengetedza simba nekuvandudza kugona
10. Kuderedza kusvibiswa kweCO2 nekugadzirisa iyo system
11. Kuchengetedzeka uye kuvimbika kuburikidza nekutarisa uye kuona zvisiri izvo zvinoenderana panguva yekutanga
12. Kuchengetedza mutengo kuburikidza nehupenyu hwakareba hwebasa
13. Bespoke mhinduro dzemunhu zvinodiwa uye zvinodiwa
14. Nyanzvi kuraira kunoenderana nemugadziri kuziva-sei
15. Ruzivo rwekuwedzera kushanda nesimba kwesystem.